Hunhu, Yakagadziriswa Projector Vagadziri, Yakagadzirwa muChina - Dongguan Yingjia Electronic Technology Co, Ltd.
Imba >Zvigadzirwa >Purojekita
Portable basic vhezheni LED purojekita
Unogona kutarisa Hollywood blockbuster LED projekita kumba. Mini inotakurika bhaisikopo purojekita inotsigira 1080P imba theatre, vhidhiyo purojekita ine 55,000 maawa LED girobhu hupenyu, inoenderana neHDMI, RCA, USB, TF memori kadhi, TV tsvimbo, PS4, iPhone. Ita kuti hupenyu hwako huwedzere kunakidza. Nezve chirongwa ichi
Mini LED purojekita
Chigadzirwa chinotengesa poindi mukana Iwe unoda kuve neWIFI mini inotakurika LED purojekita 1080P HD kumba theatre vhidhiyo projekita 2300 lumens, nakidzwa kusingaperi kwekunakidzwa kweimba yemitambo.
WiFi micro projekita, iyo yazvino kuvandudzwa ye5200 lumens yekunze LED purojekita gore rino, inotsigira 1080P kuwiriranisa smartphone screen kuburikidza neWiFi / USB tambo, kuti uone yako yakanaka yekuvaraidza kumba Nezve ino projekiti LED purojekita
Android WiFi vhezheni ye LED purojekita
Chigadzirwa chinotengesa poindi mukanaA LED HD nyanzvi Android purojekita iyo inogona kuendesa pasiri pasero nhare mbozha. Inotsigira TV HDMI / AV / USB / SD / VGA interface ine yakawiriraniswa smartphone screen, BT 4.0 1080P uye 4000 Lux inotakurika WiFi purojekita.
Mini WIFI Android LED purojekita
Iyo yakajeka uye compact LED purojekita iyo ichaita kuti iwe ufarire, wifi projekita, mini slide purojekita, 3D 1080p inotakurika mini purojekita, ine bhatiri, inogona kushandiswa kwese kupi, inogona kushandiswa kuhofisi kumba theatre nharembozha, HDMI Makaralı WiFi Wifi waya, zvakanyanya inyore kushandisa, mashandiro ari nyore kunzwisisa.